यि गायिकाले रमेशको मन चोर्न सफल भईन् ! खास कुरा के हो त ? पूरा पढ्नुहोस ।
काठमाण्डौ : रमेश प्रसाईँ, यो नाम नसुन्ने सायदै बिरलै होलन् । र उनलाई नचिन्ने पनि बिरलै नै होलान् । ज्ञान, बुद्धि र विबेककासाथै स्पमरण शक्तिमा पनि प्रखर रमेश यतिबेला कसैको मायामा परेका छन् ।
विशेषगरी रमेशलाई हामीले भाषणको फिल्डमा पोक्त एउटा व्यक्तिको रुपमा चिन्दै आएका थियौं । तर रमेश एउटा भाषणकालागी मात्र नभई बहुपतिभाका धनी व्यक्ति रहेछन् भन्ने कुरा उनले नै प्रमाणित गरिदिएका छन् ।
रमेशलाई पछिल्लो केही समय यता हामीले दोहोरी गीतहरु गाएको देख्दै आईरहेका छौं । रमेशसंग दोहोरी गाउन कस्सिने गायिकाहरुलाई रमेशको गीतको जवाफ फर्काउन हम्मेहम्मे परको हुन्छ ।
त्यही दोहोरी गीतकै शिलशिलामा रमेशले गीतको जवाफ फर्काउने क्रममा भाईको माया छ भने कल्पना दाहाललाई फकाई दिन भनेका थिए । कल्पना दाहाल दोहोरी गाईका हुन् । जस्को हिजोआज टिकटकमा रमेशसंग निकै नै भिडियोहरु सार्वर्जनिक भई रहेका छन् ।
रमेशसंग कल्पनाले आफुलाई मन पर्ने गीतमा टिकटक भिडियो बनाई रहेकी हुन्छिन् । यिनीहरुको टिकटक भिडियो हेर्दा यस्तो लाग्छ मानौं कि यिनीहरु साँच्चै नै एकअर्काको मायामा छन् । रमेशलाई टिकटकमा मस्कुराउन सिकाउने कल्पनालाई टिकटक प्रयोगकर्ताहरुले निकै नै रुचाएका छन् ।
यतिमात्र नभई रमेश र कल्पनाको जोडीलाई मन पराउने जति हाँजिर हौं भन्दै आफ्नो टिकटक पेजमा रमेश र कल्पनाको टिकटक भिडियोहरु शेयर गरेका छन् ।
Previous यी तीन गायिका जसलाई ‘लकडाउन’ फलिफाप बन्यो…हेर्नुहोस् ।
Next बलिउडमा तहल्का मच्चाएकी नेपालकी तेरिया मगर के गर्दै छिन ? हेर्नुहोस ।(फोटोफिचर)